प्रथम घेराबारी नकआउट गोल्डकप -२०७७ को उपाधि झापा एफसी राजगढलाई – Mero Mechinagar
घेराबारी, पुस २९ । झापाको कचन कवल – १ घेराबारीस्थित जारी प्रथम घेराबारी नकआउट गोल्डकप -२०७७ को उपाधि झापा फूटबल क्लब राजगढले हात पारेको छ । घेराबारीको पूर्व देउराली खेल मैदानमा मङ्गलबार सम्पन्न ‘नाईन साइड ‘ फाइनल खेलमा आयोजक घेराबारी फूटबल क्लबलाई झापा फूटबल क्लब राजगढले ३ – १ गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि जितेको हो।
मङ्गलबार सम्पन्न फाइनल खेलमा सबै गोल मध्यान्तरपछि भएको थियो । झापा फूटबल क्लब राजगढका तर्फबाट गणेश हेमरमले खेलको ५० औ मिनेटमा गोल गर्दै राजगढलाई अग्रता दिलाए । त्यसैगरी अभिषेक गुरुङले खेलको ५८ र ६७ औ मिनेटमा दुई गोल गर्दै फाइनल खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । घेराबारी एफसी तर्फबाट खेलको ७६ औ मिनेटमा गिल्सन कन्दङ्वाले एक गरे । करीब ३ हजार दर्शकले हेरको सो रोमान्चक खेलमा घेराबारी एफसीका खेलाडीहरुले गोल गर्ने थुप्रै अवसर गुमाएका थिए ।
श्री घेराबारी युवा परिवारको आयोजनामा भएको प्रथम घेराबारी नकआउट गोल्डकप -२०७७ प्रतियोगिताको विजेता झापा फूटबल क्लब राजगढले नगद रु ५० हजार ,मेडल र ट्रफी प्राप्त गर्र्यो । त्यसैगरी उप विजेता घेराबारी एफसीले नगद रु . ३० हजार ,मेडल र ट्रफीमा चित्त बुझायो । खेल अवधिभरी खेलाडीको खेल प्रदर्शनलाई मूल्याकन गर्दै उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई पुरस्कार र सम्मान गरियो । झापा फूटबल क्लब राजगढका तर्फबाट बेस्ट गोलकिपर , बेस्ट डीफेन्डर र बेस्ट म्यानेजर घोषित भए । त्यसैगरी बेस्ट प्लेयरमा घेराबरी एफसीका कर्ण लिम्बू र हाइ स्कोररमा झापा एफसी राजगढका अभिषेक गुरुङ्ग र घेराबरी एफसीकै कर्ण लिम्बू लिम्बूले समान ४ गोल गर्दै प्राप्त गरे।
विजेता तथा अन्य खेलाडीलाई प्रमुख अतिथि झापा क्षेत्र नम्बर ३ का प्रत्यक्ष निर्वाचित राप्रपाका संसाद राजेन्द्र लिङ्देनले पुरस्कार वितवरण गर्नुभएको थियो । लिङ्देनले खेलाडीहरु देशको गहना भएको र खेलाडीको लागि जतिबेला पनि सहयोग गर्न आफू तयार रहको बताउनु भयो । सो अवसरमा विशेष अतिथिका रूपमा कचन कवल गाउँ पालिका प्रमुख आलम अन्जार र उप प्रमुख निम्सरी राजवंशी उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रथम घेराबारी नकआउट गोल्डकप -२०७७ को समापन सुखद भएको आयोजक तथा श्री घेराबारी युवा परिवारका अध्यक्ष देउ कुमार माबो लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । उँहाले गोल्ड कपको प्रथम पुरस्कारका लागि जूनतारा कन्स्ट्रक्सन चन्द्रगढी निवासी राज कुमार राईले नगद रु. ५० हजार र र उप विजेताको लागी मेन पावरका संचालक काभ्रे निवासी सुनरानी लामाले नगद रु .३० हजार सौजन्य उपलब्ध गराउनु भएको बताउनुभयो । पुस २० गतेबाट शुरु भएको प्रथम घेराबारी नकआउट गोल्डकप -२०७७ ‘नाईन साइड ‘ फूटबल प्रतियोगिता पुस २८ गते समापन भएको हो। कोरोना महामारी पछिको झापा जिल्लामै पहिलो गोल्ड कपको रुपमा सन्चालन भएको सो प्रतियोगितामा झापाका विभिन्न ८ फूटबल क्लबको सहभागिता भएको रहेको थियो ।
बिर्तामोडमा राष्ट्रिय भक्का दिवस मनाइयो